XOGTA Xaalada Muqdisho iyo Maamul Goboleedyada oo Qaatay Go'aanka Dhana RW Rooble iyo MD farmaajo - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalXOGTA Xaalada Muqdisho iyo Maamul Goboleedyada oo Qaatay Go’aanka Dhana RW Rooble iyo MD farmaajo
September 17, 2021 News Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somaliland, Wararka Khaatumo, Wararka Maanta 3
Ra’iisal Wasaarahii Hore Xasan Cali Khayre oo Markii ugu Horeysey Ka Hadlay Khilaafka Raysal Wasaaraha iyo Madaxweynaha iyo Dilkii Ikraam dahliil
Labo cilladood ayaa aniga ii muuqda in ay siyaasadda Soomaaliya sidan xun ucuryaamiyeen, waxayna yihiin: (i) qowsaarro dawladdii kacaanka kasoo haray (ii) shacab aan dawlad-wanaagga khibrad iyo aqoon toona ulahayn.
Marka giddigood loofiirsado, siyaasiyiinta ay dawladnimada Soomaaliya haddeer kaxasili kari la’dahay waa kuwo dawladdii kacaanka ee burburtay khibrad usoo lahaa oo badankooduna xubno kasoo ahaayeen amase dowr kasoo qaateen – si toos ah iyo si dadbanba.
Kuwanu waxay cillad dalka ugu noqdeen in maankoodu weli kuqufulanyahay nadaamkii dawliga ahaa ee kushaqeyn jiray inuu madaxweyne Villa Muqdisho fadhiya dalka intiisa kale toos ugu taliyo oo ay Xamarna caasimadda keliya noqoto.
Maankan gurracan ayaana dhammaantood kayeelay inuu mid walba xoog iyo xooloba duldhigo sidii uu isagu villadaas salka ula haleeli lahaa oo dalkana “ugutalin” lahaa, waana sababta ay siyaasadda dalka Xamar iskugusoo biyoshubatay oo harddintuna ugadhex socoto, iyada oo islamarkaana lagu andacoonayo inuu dalku nadaam federaali ah haybsaday.
Haddii uu dalku nadaam federaali ah qaatay, nadaamkan hab-udhaqankiisu waa mid aad uga duwan oo cagsina ku ah nadaamkii dawladdii kacaanka, sidaas ajligeedna uu waajibku ahaa in siyaasadda dalku haddeer dawlad goboleedyada ka shidantahay oo loollanka doorashona ay caasimadahooda ka aloosantahay oo diiradda caalamka iyo saxaafadduna saaranyihiin. Haddase sidaas ma aha oo weli Xamar ayaa loo baratamayaa.
Cilladda labaad waa shacabka oo sixun uga jaahilsan macnaha iyo murtida dhabta ah ee dawlad-wanaagga salka kuhaya dawlad-wadaagnimada, maadaama uusan khibrad hore usoo lahaanin. Sida caadiga ah, shucuubta dawlad-wanaagga waaya’aragnimada taamka ah u leh iyaga ayaa siyaasadda dalkooda toos uhaga oo damaca siyaasiyiintoodana siyaabo aan dagaal ahayn u xakameeya.
Nasiibdarro, Soomaalida haddeerani waxay ukala qeybsatay labo jiil oo midna dawladdii kacaanka kusoo hos koray oo sida hadda wax u dhacayaan caadi u arka; iyo mid kasii yar oo waxaba sixun ula jahawareersan oo dhan uu u lasafto aan aqoon.
Saaxiib qoraalkaagaa hore aad baan ula dhacay, waanad ku mahadsan tahay.
Fiiro gaar u yeelo waxa soo socda, ood dhowaan laba sii yaabi doonto, taaso ah in dumarkan meel fog shaqo looga dirsan doono.
Wana hubaal inay goor dhow oran doonan naag imaam masjid ka ah baanu xaq u leenahay ee hana siiyo.
fanaka cowdu Bilaah.
Saaxiib, salaan gobeed iga guddoon marka ugu horreeya. Bacdigeedna, aad baan kaaga mahadinayaa inaad qoraal aan leeyahay mudnaan siisay oo aragtina kadhiibatay.
Waanan kula wadaagaa 100% aragtidaada fog ee aad kagasii bidhaansatay khatarahaas nagu soo socda ee Islaamnimadeenna iyo Soomaalinimadeennaba halista xun gelin doona haddii aynnaan haddeer taxadar kasii gelin xaqiiqdii.